Policy code 2.1 , အား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၄ လပိုင်း ၁ ရက်နေ့ တွင် ချေးငွေ stock ကုမ္ပဏီအဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။လူကြီးမင်းသည် Lendmo ဝန်ဆောင်မူအသုံးပြုသူ customer တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ policy မှာပါသည့် စည်းကမ်းများအတိုင်းလိုက်နာ လက်ခံရပါမည်။
Article 1, သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းခြင်း။
lendmo-myanmar.com will collect your IP address and other standard web information such as the type of browser, the pages you visit during the service usage, information about computers and network devices, etc. Purpose of security and transaction security. If you use the services of lendmo-myanmar.com, we will ask you to provide true and accurate information as follows:
တစ်ဦးတည်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်( အသင်းအဖွဲ့အစည်း) စသည့် အမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ လိင်အမျိုးအစား၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ E mail လိပ်စာ၊ လူမူကွန်ယက် အကောင့်များ ( facebook account စသည်များ) ၊ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများ( မှတ်ပုံတင်ကတ်၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ) စသည့် များကို ရယူပါ့မည်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ( ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်များ၊ အကြွေးဝယ်ကတ် နံပါတ်များ ) စသည့် များ
Lendmo ဝန်ဆောငိမူ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း စသည့်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘက်မှ စုဆောင်းပါမည်။
တချို့ သော ဖြစ်စဉ်များတွင် ဘဏ်များ၊ အကြွေးဝယ်မူ အခြေအနေများ၊ ပေးချေမူများ၊ network အသုံးပြုမူများ စသည့် third party များမှ ကျွန်ုပ်တို့ သည် အချက်အလက်များကို ရယူပါမည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မူများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို တိကျအောင် စုဆောင်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Article 2, အချက်အလက်များတည်ဆောက်ခြင်း
When you visit lendmo-myanmar.com, we (or third parties who are hired to track or index the operation of the website) will place some small data files called cookies on your hard disk or computer memory.
တချို့Cookies များသည် လူကြီးမင်း ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နောက်တစ်ကြိမ် page တွင် login ဝင်ရောက်ရန်email အား သိမ်းထားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်
We will encrypt the files Cookies for security, you can prohibit cookies on your browser, but this may affect the process of using your lendmo-myanmar.com.
Articles 3, အများနှင့်သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ ကာကွယ်ပေးခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ သည် Myanmar တွင်ရှိသော Server တွင် လူကြီမင်း၏ အချက်အလက်များအား သိမ်းဆည်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြောက်များလှစွာသော စာရွက်စာတမ်းများ( ဥပမာ- server များအပါအဝင်) , လျပ်စစ်နည်းပညာများ ( firewall နှင့် data encryption )လုပ်ခြင်းများ နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ စီမံမူများမှ ကျွန်ုပ်တို့ သည် သတင်းအချက်အလက်များအား ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။
Article 4, သတင်းအချက်အလက်အသုံးပြုခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ပန်းတိုင်သည် လုံခြုံမူစိတ်ချမူ ၊ ကျွမ်းကျင်မူနှင့် ဝန်ဆောင်မူးများအား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပေးစွမ်းနိုင်ရန် အခြေခံထားသော မူဝါဒဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များ အသုံးပြုရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
( က ) Customer care နှင့် ဝန်ဆောင်မူ ထောက်ပံ့ခြင်း
( ခ ) ငွေလက်ခံရ ရှိမူ ပြီးစီးဆောင်ရွက်နိုင်စေခြင်း၊ ငွေ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း၊ နှင့် စာတိုပေးပို့ ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ
( ဂ ) ဆုံးရှုံးမူများမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ တရားဝင်ဆောင်ရွက် တားမြစ်ပေးခြင်းများ၊ User Agreement Policy အတိုင်း လေးစားလိုက်နာခြင်း
( ဃ ) တွက်ချက်ပေးခြင်း၊ Customer စိတ်ကျေနပ်စေရန် ဝန်ဆောင်မူပေးခြင်း၊ website များမှ ရယူခြင်း
( င ) လူကြီးမင်း၏ ဈေးကွက်အစီအစဉ်များ၊ Annoincements နှင့် Promotions ပွဲများ တင်သွင်းခြင်း
( စ ) Third party များမှ လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်များအား မှန်ကန် မမှန်ကန်မူအား နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
( ဆ ) အကြွေးပေးချေမူအားတွက်ချက်၍ ချေးငွေ ခွင့်ပြုခြင်း
Article 5, တခြာသုံးစွဲသူများအား မျှဝေခြင်း
Lendmo ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆက်သွယ်မည့် လိပ်စာများ၊ မှတ်ပုံတင်ရက်စွဲများ၊ Transactions နံပါတ်များ နှင့် Account မှတ်တမ်းများ စသည့် လူကြီမင်း၏ Personal Information များကို ကျွန်ုပ်တို့ သည် အသင်းအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများအား မျှဝေရမည်ဖြစ်သည်။
Public agency များနှင့် ဥပဒေများအား ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုက်နာရမည်ရဖြစ်သောကြောင့် လူကြီးမင်း၏ ဘဏ္ဏာရေးအချက်အလက်များအား ထုတ်ဖော်ပြောကြားမည်မဟုတ်ပါ။
Articles 6, Third Party များသို့သတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်း
သင်၏ Personal အချက်အလက်များအား လက်ခံရယူခြင်းနှင့် မျှဝေခြင်းများ ရယူ ရမည်ဖြစ်သည်။
( က ) ငွေထုတ်ချေးသူများနှင့် တခြားချေးငွေ ရယူသူများအား ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်၍ အန္တရာယ်ရှိသော အလားအလာများမှ ကာကွယ်ပေးကာ ဝန်ဆောင်မူပေးခြင်း။
ချေးငှားသူတွေက Lendmo နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စာချုပ်တွင် ချေးငှားသူများက ၄င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားချုပ်ဆိုခြင်းတွင် သင်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား အသုံးမပြုရန် သဘောတူတောင်းဆိုသည်။
အများပိုင်ကုမ္ပဏီများ ။ တရားဥပဒေနှင့် အညီ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ လိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ လြူုကီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြင်ပတွင် အသုံးပြုခဲ့ပါက သင်၏ notifications တွင် ဦးစားပေးအဖြစ် လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။ ၄င်းအပြင် သတိပေးစာပါ ရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ဥပဒေဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အာဏာရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် Thirt Party များသည် အောက်ပါစည်းမျဉ်းများအားလိုက်နာရမည်။
တရားရုံးများနှင့် အလားတူ ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များလည်းရှိသည်။
တရားဥပဒေမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းဥပဒေများလည်း ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု့များလည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။
သင်၏ Personal အချက်အလက်များအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အရ ပျတ်စီးမှု၊ မမျှော်လင့်ထားသော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု့ ချိုးဖောက်ခြင်းများ ကို ကာကွယ်ရန် အပြည့်အဝ ယုံကြည်လက်ခံရမည်။
မည်သည့် third party များကိုမဆို ခွင့်ပြုရမည်။
အထက်ပါ ဖော်ပြချက်များအရ Lendmo သည် သတင်းအချက်အလက်များအား third party များသို့ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်းများကို ပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Article7သတင်းအချက်အလက်ပြောင်းလဲခြင်း
သင်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သို့ပါသော်လည်း လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့်လုပ်ရပ်များကို ကာကွယ်ရန် ပြောင်းလဲထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့သည် သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်သည်။ Lendmo သည် ပေါ်လစီ၏ ပြောင်းလဲထားသော အကြောင်းအရာများကို သီးသန့် ထားရှိမည် ဖြစ် ပြီး website သို့မဟုတ် email မှတစ်ဆင့် အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။